KETO GURU ဝယ်ပါ effervescent တက်ဘလက် မှ K မြန်မာပြည်
Keto Guru Effervescent တက်ဘလက်
ဝယ်ပါ Keto Guru
Keto Guru - keto အစားအစာအတွက်မြှင့်တင်ပေးသောတက်ဘလက်များ
ဒီကိရိယာအားဖြင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာသင်တန်းတစ်ခုမှာ ၂ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၅ ကီလိုဂရမ်အထိဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီ။ယခု Keto Guru ကို ၀ ယ်ပြီးသူတို့ရာထူးများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။K
ယခုအချိန်တွင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဈေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
Keto Guru - အစာမစားရဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
ကိန်းဂဏန်းများအရမြန်မာနိုင်ငံရှိလူ ဦး ရေ၏ ၈၆% ကျော်သည်သူတို့၏ကိန်းဂဏန်းကို မကျေနပ်၍ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုကြသည်။သို့သော်တူညီသောကိန်းဂဏန်းများအရလူ ၁၀၀ တွင် ၆ ဦး သာကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်။ ကျန်သူများအတွက်မူ၎င်းသည်အိပ်မက်မက်နေဆဲဖြစ်သည်။သို့သော်ဥရောပ၌, အဝလွန်အောင်မြင်စွာနှစ်ပေါင်းများစွာကုသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်သော်လည်းအားအင်အားမပြည့်စုံလိုပါသလား။စဉ်ဆက်မပြတ်ပျက်ပြားမှုနှင့်တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ငြီးငွေ့နေပြီလော။သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာများကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့်ဘာမျှမအလုပ်လုပ်ပုံရသည်? အာဟာရဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ငွေတစ်တန်သုံးခဲ့သော်လည်းအချည်းနှီးသာ? Keto Guru သည်တော်လှန်ရေးတက်ကြွသောအာဟာရဓာတ်ပါသောဆေးဖြစ်သည်။ သင်ဂန္တ ၀ င်နည်းစနစ်များအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အရာကမျှအကူအညီမပေးနိုင်လျှင်ပင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
သဘာဝအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်ဇီဝဖြည့်စွက်မှုအသစ်ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။စမ်းသပ်မှုတွင် ၁၀ ကီလိုမှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်သည်။အဆိုပါဘာသာရပ်များ 1 လကြာမူးယစ်ဆေးဝါးကိုယူ။
၄၃% ဟာ ၁၅ ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
၅၂% က ၁၀-၁၅ ကီလိုဂရမ်ကျဆင်းသွားတယ်။
၃% သည် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အောက်လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့သည်။
၂% သည် ၅ ကီလိုဂရမ်အောက်လျော့နည်းသည်။
Keto Guru ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
ဆေးပြားသည်လူတို့၏သဘာဝအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်လူသိများသော ketogenic အစားအစာ၏နိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်:
တစ်ပတ်အကြာတွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆဲလ်များ (ketosis) ၏ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစာငတ်မွတ်မှုအခြေအနေသို့ကျဆင်းသွားသည်။
၄ င်းကိုယ်ခန္ဓာကို ketosis သို့ယူရန်တစ်ပတ်ကျော်ကြာသည်။Keto Guru တက်ဘလက်တစ်လုံးကဒီအချိန်ကို ၁ နာရီအထိလျှော့ချပေးတယ်။
Keto Guru အစားအသောက်များတွင်ဆေး၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ချို့ယွင်းသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ဟော်မုန်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ အလွန်အမင်းစားခြင်း၊ရှေးရိုးစွဲနည်းလမ်းများသည်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်ခဲခဲသည်။Keto Guru effervecent တက်ဘလက်များသည်အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာရှိသဘာဝအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်သဘာဝဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအားဟော်မုန်းနောက်ခံနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိပဲတက်ကြွစေပြီးသန့်စင်ပေးသည်။ဤဆေးလုံး၏အကူအညီဖြင့်အဆီဓာတ်အားလုံးသည်စားသုံးခြင်း၏ပထမနေ့တွင်တက်ကြွသောစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောထိရောက်မှု။Keta အစားအစာနှင့်မတူဘဲဆေးပြားများသည်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်စဉ်ကို ၃ ကြိမ်အရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာတတ်သည်။Keto Guru သည်၎င်းကိုသောက်ပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အတွင်း ketone ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်သည်။
ရှုပ်ထွေးသောသက်ရောက်မှု။သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရုံသာမကတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုခိုင်မာစေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်စင်ပေးသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် antioxidant အကျိုးသက်ရောက်မှု lymphatic ရေနုတ်မြောင်းကိုလက်ခံရရှိသည်။
တတ်နိုင်သောကုန်ကျစရိတ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအတွက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသော - ၄၅ ယူရိုစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ထို့ကြောင့် Keto Guru effervecent တက်ဘလက်များကို ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်မှာယူရန်လိုသည်။ဤနည်းအားဖြင့်အတုများကိုသင်ရှောင်ရှားလိမ့်မည်။
Keto Guru ဖွဲ့စည်းမှု - ပါဝင်ပစ္စည်းများလုပ်ဆောင်ချက်များ
Keto Guru effervecent တက်ဘလက်များသည်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးအရှိဆုံးသောသဘာဝဒြပ်စင်တစ်ခု၏သိုလှောင်ခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်အချိုးအစား၏ထူးခြားသောပုံသေနည်းသည် keto အစားအစာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းအားခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေဘဲကောင်းမွန်စေသည်။၎င်း၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။
နီယာကင်။သူကဗီတာမင် B3 ပါ။အသည်း, buckwheat, ပဲတွင်ပါရှိသော။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစွမ်းအင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ ဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ပန်ကရိယ၊ အသည်း၊ အစာအိမ်ဖျော်ရည်တို့၏အင်ဇိုင်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်၊ အပင်ပရိုတိန်းများသွတ်သွင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
L-glutamine ။အမဲသား၊ parsley၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်များတွင်တွေ့ရသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်။၎င်းသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း၏ဆဲလ်များအတွက်စွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအချို့သောအင်ဇိုင်းများနှင့် serotonin ပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်သည် ketosis ၏သက်ရောက်မှုကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျသောအခါကြွက်သားထုကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Pyridoxine ။သူကဗီတာမင် B3 ပါ။အများဆုံးပမာဏကို pistachios တွင်တွေ့ရသည်။ဤအစိတ်အပိုင်းသည်ပရိုတိန်းနှင့်အဆီအများဆုံးစုပ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးပိန်သောဗီဇထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။၎င်းကိုအဝလွန်ခြင်းအတွက်ဗီတာမင်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်မပြည့်ဝသောအက်စစ်အက်စစ်များ၏စုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
Gamma Aminobutyric အက်ဆစ်။အစေ့များ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ketones ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ကြွက်သားထုထည်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
စည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေနှင့်လူသိများသောအဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီးသောဆေးများအားလုံးသည်အရည်ဖယ်ရှားရန်နှင့်အူများကိုသန့်ရှင်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။Keto Guru ကသာကိုယ်ခန္ဓာအဆီကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Keto Guru effervescent တက်ဘလက်အတွက်ဇီဝဖြည့်စွက်မှုအသစ်ကိုမှာယူပါ။ ပထမလအတွင်းကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ်အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
ျ, 22 နှစ်များ, Mitkina
၂ လတွင် ၁၃ ကီလိုဂရမ်ကျခဲ့သည်။အစားအသောက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် keto ဂုရုကို ၂ လလောက်ကြာအောင်မခွဲဘဲမယူခဲ့ပါ။ဒီတက်ဘလက်တွေကဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကောင်းအောင်ကူညီပေးတယ်၊ ပိုလျှံတဲ့အရည်တွေ၊ ပုံမှန်ကိုလက်စထရောနဲ့သကြားဓာတ်တွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ယခုတွင်ငါသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သော၊ ပါးလွှာပြီး sexy အရွယ်အစားရှိသောအရွယ်အစား ၂ မျိုးကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်ဆန္ဒရှိသည်။
လိင္, 31 နှစ်များ, မော်လမြိုင်
ကျွန်ုပ်သည် ၁၈ ကီလိုဂရမ်အဝလွန်နေသော်လည်းကိုယ်အလေးချိန်မကျနိူင်ပါ။နာတာရှည် gastritis ကတည်းကအစားအစာများကနေမကောင်းတဲ့ဖြစ်လာသည်, အစာရှောင်ခြင်း, contraindicated ဖြစ်ပါတယ်။ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာအားကစားအတွက်မသွားနိုင် - ငါ့အဆစ်နာလာတယ်။ငါ forum တွင် Keto Guru အကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ပါကကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ငါ ၄ ပတ်ကြာအောင်သောက်ခဲ့ပြီး ၉ ကီလိုဂရမ်နီးပါးရှိသည်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါ့အစာအိမ်တစ်ချိန်တည်းမှာကောင်းသောခံစားရသည်။
ကွင်းဆက်, 26 နှစ်များ, Kotong
သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းနှင့်သကြားဓာတ်များလာခြင်းတို့ကြောင့်ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများရှိကြောင်းဆရာဝန်ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများအရှုံးမပေးရန်အလိုတော်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ကိုယ်အလေးချိန်မနိုင်! ပြီးတော့ကျွန်တော့်မိန်းမက Keto Guru ကိုစမ်းကြည့်ဖို့အကြံပေးတယ်။ငါ ၂ လကြာဆေးပြားတွေသောက်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာကီလို ၂၀ နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သကြားဓာတ်၊ သွေးပေါင်ချိန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးအသက်ရှူကျပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်အဝလွန်ခြင်းပြveryနာသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။နေ့တိုင်းအသက်အရွယ်အသီးသီးရှိရာထူးအသီးသီးရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ထံသို့လှည့်လာကြသည်။ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အပိုအလေးချိန်ကနေခံစားရတယ်။သိပ်မကြာသေးခင်ကသူတို့ကို keto အစားအစာကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လူနာအများစုသည်ဤအစားအစာကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်အိပ်ချင်စိတ်ကိုညည်းညူကြသည်။မူးယစ်ဆေးဝါး keto ဂုရုပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ဤချောဆေးများသည်ဤအစားအစာ၏အားနည်းချက်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီးယင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးစေသည်။Keto Guru တွင်ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်အတု "အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း" မပါရှိရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ပရိုတင်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုတင်းဓာတ်၏ထူးခြားချက်များ၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။ခွင့်ပြုကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုပေးပါ၊ နေ့စဉ်အစားအစာရွေးချယ်မှုများကိုကမ်းလှမ်းပါ။
Blender မှာ slimming smoothie ကဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ကော့တေး၊ smoothie ကိုအခြေခံသောအစားအစာပြင်ဆင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်စည်းမျဉ်းများဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘာရလဒ်မျှော်လင့်လဲ။အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ။
3 သြဂုတ်လ 2021